Devuan 3.0 Beowulf wuxuu la yimid saldhigga Debian 10.4, Kernel 4.19 iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Devuan 3.0 Beowulf wuxuu la yimid saldhigga Debian 10.4, Kernel 4.19 iyo in ka badan
Xulka wararka oo dhan | | Qaybinta
Daahfurka nooca cusub ee qeybinta Linux "Devuan 3.0 Beowulf" taas oo ah fargeeto ah Debian, laakiin lagu gartaa iyada oo aan lahayn systemd.
Laanta cusub ayaa caan ku ah u guuritaanka saldhiga xirmada Debian 10 "Buster", marka lagu daro taas oo qayb ka ah mashruuca, noocyada ku dhowaad 400 xirmooyinka Debian ah ayaa la abuuray oo wax laga beddelay si looga takhaluso isku xidhka nidaamka, dib u qaabaynta ama la qabsiga qaababka kaabayaasha Devuan.
Laba baako (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) waxay kujiraan oo kaliya Devuan waxayna laxiriiraa qaabeynta keydadka iyo howlgalka nidaamka dhismaha. Haddii kale, Devuan si buuxda ayuu u hoggaansamayaa Debian waxaana loo isticmaali karaa aasaas u ah dhisidda takhasus gaar ah oo Debian ah oo aan nidaam lahayn.
Desktop-ka asalka ah wuxuu ku saleysan yahay maareeyaha soo bandhigida Xfce iyo Slim, in kasta oo ay sidoo kale jirto ikhtiyaar u ah rakibidda KDE, MATE, qorfe iyo LXQt.
Halkii laga nidaamsan lahaa, nidaamka bilowga ah ee SysVinit ayaa la siiyaa. Ikhtiyaari waa qaab hawlgal la'aan D-Bus la bixiyo, taas oo u oggolaanaysa abuuritaanka qaabeynta qaabeynta ugu yar ee desktop-ka oo ku saleysan sanduuqa madow, fluxbox, FVWM, FVWM-crystal iyo maareeyayaasha Openbox.
Si loo hagaajiyo shabakadda, ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari NetworkManager ah ayaa la soo jeediyay oo aan ku xirnayn nidaam. Si loo maareeyo kal-fadhiyada isticmaaleyaasha ee KDE, Qorfe iyo LXQt oo loo yaqaan 'elogind', ikhtiyaar ikhtiyaari ah, oo aan ku xidhnayn nidaamka. Isticmaalka Xfce iyo MATEconsolekit.
1 Maxaa ku cusub Devuan 3.0?
2 Soodejiso Devuan 3.0.0 Beowulf
3 Sidee loo cusbooneysiiyaa Devuan 3.0 Beowulf laga bilaabo Devuan 2.x?
Maxaa ku cusub Devuan 3.0?
Qeybtan cusub ee qaybinta, sida ku xusan bilowga, cibaada-weynaha ugu weyni waa u guurista saldhigga xirmada "Buster" ee Debian 10 (baakadaha waxaa lala jaanqaaday nooca Debian-ka 10.4) iyo dhinaca Nooca Linux kernel 4.19 ayaa la bixiyaa.
Isbedelada kale ee ka muuqda Devuan 3.0 ayaa ah geedi socodka asalka ah ee eudev iyo elogind si loo beddelo qaybaha nidaamka monolithic ee mas'uulka ka ah maaraynta feylasha qalabka ee galka / dev, maaraynta isku xirnaanta iyo / ama ka goynta qalabka dibedda, iyo maaraynta kal-fadhiyada isticmaalaha.
Sidoo kale, qaabkan cusub taageerada dhismaha ppc64el hadda waa la heli karaa, marka lagu daro barnaamijyada horay loo taageeray i386, amd64, armel, armhf, iyo arm64.
Sidoo kale, waxaan ka heli karnaa a maareeyaha shaashadda cusub, oo lagu daray qaab-dhismeedka xamuulka oo la beddelay iyo mawduuc cusub oo desktop ah ayaa la soo jeedinayaa. Waxaad ikhtiyaar ahaan u isticmaali kartaa maamulaha nidaamka runit-ka beddelka / sbin / init waxaadna isticmaali kartaa nidaamka bilowga OpenRC bedel ahaan adeegga sysv-rc iyo kontaroolada heerka socodka.
Finalmente hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato, waad hubin kartaa faahfaahinta Xiriirka soo socda.
Soodejiso Devuan 3.0.0 Beowulf
Haddii aad rabto inaad soo dejiso qaybinta Linux waa inaad tagtaa degelkeeda rasmiga ah iyo qaybta soo degsashadeeda waxaad ka heli kartaa sawirka nidaamka mid ka mid ah muraayadaha la heli karo Waxaa ugu fiican in la isticmaalo kan kuugu dhow, ah link waa kan.
Sidee loo cusbooneysiiyaa Devuan 3.0 Beowulf laga bilaabo Devuan 2.x?
Si Haddii aad ku rakibtay nooca Devuan 2.x, waxaad ku cusbooneysiin kartaa nooca cusub ee xasilloon adigoon dib u cusbooneysiin nidaamka.
Arrintan awgeed waa inaad furtaa terminal oo aad fulisaa amarrada soo socda. Marka hore waxaan ku dari doonnaa meelaha loo yaqaan 'Devuan 3.0' meelaha loo yaqaan 'list.list', oo ku yaal wadada: /etc/apt/sources.list
Waxaan ku saxeynaa tafatiraha aan doorbideyno oo waxaan ku darnaa meelahan keydka ah (waa muhiim inaad ka faallooto bakhaar kasta oo kale oo leh # bilowga ama ka saar meesha si looga fogaado dhibaatooyinka cusbooneysiinta):
Waxaan badbaadinaynaa isbeddelada.
On terminal waxaan ku fulin cusbooneysiin:
Ka dibna waxaan ku qornaa amarrada soo socda:
Ugu dambeyntiina waxaan ku cusbooneysiineynaa nidaamka:
Halkan waa inaan sugnaa waa tan iyo markay bilaabi doonto inay soo dejiso dhammaan xirmooyinka iyo qaabeynta lagama maarmaanka u ah cusbooneysiinta. Nidaamkani wuxuu qaadanayaa waqti, markaa terminal-ka hawsha ayaa loo isticmaali karaa in lagu qabto hawl kale oo kombuyuutarkaaga nidaamkiisa lagu cusbooneysiiyo.
Dhamaadka waxaad u baahan doontaa inaad dib u bilowdo kombuyuutarkaaga dhammaan isbeddelada inay dhaqan galaan iyo marka aad dib u bilowdoba, waa inaad aragto inaad horay u haysatay nooca cusub ee Devuan.
Haddii ay dhacdo xirmo la'aan, xirmooyinka fashilmay waa in la hagaajiyaa ka dibna dib u cusbooneysiinta mar labaad.
Isticmaalayaasha ka soo haajiray ASCII isla markaana isticmaalaya kor u qaadista waxay u baahan doonaan inay hoos u dhigaan xirmooyinka kor u qaadista si ay uga fogaadaan arrimaha:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Devuan 3.0 Beowulf wuxuu la yimid saldhigga Debian 10.4, Kernel 4.19 iyo in ka badan
Wanaagsan, waxaan u guuri doonaa adeegeyga midka cusub, iyadoo taxaddar fiican la leeyahay, dabcan ..
Ku jawaab luix
Javier Ortega Conde (Malkavian) dijo
Waxaan u isticmaalaa baaritaanka Devuan kombuyuutarka kumbuyuutarka, marka aniga ahaan waa ii sii deyn, waxaan sii wadaa cusbooneysiinta iyo muddada ...
Jawaab Javier Ortega Conde (Malkavian)
Wax soosaarka ilaa ugu badnaan: Sidee si qoto dheer loogu adeegsadaa codsiga Maskaxda?
Linux Mint ayaa xannibi doona rakibidda snapd ee qarsoon